Akụkọ - Nnukwu ọchịchọ maka ikpochapu nje na-eme ka uto, akụkọ
OHIO - industrylọ ọrụ na-ehichapụ ihe na-ehichapụ ụwa ga-erute ijeri US $ 19.64 na 2020, dịka a na-ahụ disinfecting na ndị ọzọ na-adịghị na-ehichapụ dị ka ngwaọrụ dị mkpa iji gbochie mgbasa nke ọrịa coronavirus.
Maka disinfecting na-ehichapụ uto tonnage na 2020 ga-abụ 36.8%, dị ka data sitere na nyocha ọhụrụ nke Smithers - Ọdịnihu nke Global Nonwoven Wipes na 2025; na ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-akọ na nke a ga-abụ ihe karịrị 200% ma ọ bụrụ na ikike zuru ezu dị.
Ọnọdụ ụfọdụ nke ntiwapụ nke Covid-19 pụtara na ọchịchọ maka ọtụtụ nhichapụ nke akụkọ ihe mere eme na-ahụkarị dị ka ịzụrụ ezi uche, ga-anọgide na-abụ nlọghachi-ihe akaebe n'ofe oge mgbake. Onu ogugu onu ahia ga-eru $ 20.63 ijeri na 2021, ma gaa n'ihu na-agbasa na onu ogugu onu ogugu kwa afo (CAGR) nke 5.8% iru $ 26.07 na 2025.
Olu nke ihe na-adịghị edozi ga-ebili n'otu oge ahụ. Site na nde 26.24 nde square na 1.44 nde tọn na 2020; ruo 38.32 nde mita na 1.97 nde tọn na 2025.
Onye edemede akụkọ Phil Mango kọwara, sị: “Site n’ọrịa ahụ na-efe efe, ụlọ ọrụ ndị na-ekpochaghị ihe na-ehichapụ ihe na-aga n’ihu na-arụ ọrụ, na-enye ngwa ọrụ iji belata ma belata mmetụta nke nje ahụ. Na 2020, ụlọ ọrụ na-ehichapụghị nke ọma enwetawo mmụba n'ọchịchọ nke gbagwojuru usoro niile nke ọkọnọ ahụ. E webatala ihe na-ehichapụ disinfecting na ọnụọgụ ndekọ, yana ịchọrọ maka nhichapụ antibacterial na nhichapụ ahụike amụbawokwa na ọnụọgụ pụrụ iche.
“Maka ụfọdụ ihichapu akụkụ a, ihe a dị elu ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ, - yana mkpokọta zuru ụwa ọnụ na-ehichapụ na-achọ site na 2025 ga-agafe amụma ndị gara aga.”
Nkwupụta ahụ na-enyocha ahịa maka ụdị nhichapụ anọ (Baby, Nlekọta Onwe, Nlekọta ,lọ, Ọrụ) na ngalaba 16. O gosiputara ihe nlere ndia na nke mbu n’ime 2020 na karia:
Covid-19 enwewo mmetụta kachasị emetụta ya na nhichapụ ụlọ. Disinfecting wipes bụ nke abụọ kasị emetụta ahịa nke nke niile nonwovens, n'azụ naanị ihu nkpuchi mgbasa ozi. Enweghi mmụba a na-enwetụbeghị ụdị ya na 2020 ka ejidere naanị site na enweghị nnweta, yana ịgbanwe ikike. Isi disinfectant hichapụ suppliers na-eme atụmatụ na ọ ga-abụ ufọt ufọt 2021, ke mbụ tupu ramped elu ọkọnọ nwere ike dakọtara ugbu a ina. Ugbua mpaghara kacha baa uru na ahịa, nke a ga-ahụwanye nnweta achọ na 2025, nke nhichapụ ụlọ na-eduga.
Nwa na-ehichapụ ya bụ otu akụkụ kachasị ukwuu nke ahịa a, na-aza 48.4% nke tonnage niile. Na 2020 enweela ịrị elu nke ọchịchọ, ebe ndị ahịa chọrọ ịchekwa nhichapụ nke ụdị niile, ọnụ ọgụgụ a dị nwa oge ga-egosipụta na ntakịrị mmụba ntakịrị maka 2021-2025
Mkpọchi (ndo-na-ebe) iwu na ọbịbịa nke ọrụ ụlọ na-eduga na mmụba n'ọchịchọ maka ihichapụ nlekọta onwe onye. Kọ ụkọ na ọkara nke mbụ nke 2020 mere ka ndị na-azụ ahịa na-azụta anụ ụlọ mposi na-adịghị mma na ndị toro eto eto. Mmụba a ga - abụ obere oge. Ọ bụ ezie na uto ga-akwụsịlata na 2021, ngalaba a ga-abụ ọnụ ahịa kachasị ọnụ ahịa na ọsọ na-eto ngwa ngwa nke ụdị isi nhicha niile
Covid-19 na-atụ anya na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nhichapụ ụlọ ọrụ ehichapụrụ azụmahịa na-azụ ahịa ga-abụ nke kacha sie ike. Akpan akpan isi ọrụ na akpakanamde na-ewu ụlọ ahịa ama esịn oriri; na ihichapụ ọrụ ihe oriri belatara nke ukwuu n'ihi mmechi nke ụlọ mmanya, ụlọ ahịa, na ụlọ nri.
Ngalaba nke na - ahụ ịrị elu kasịnụ na-achọ bụ n'ụzọ doro anya na-ehichapụ nlekọta ahụike, yana mmụba nke disinfection bụ ihe dị mkpa iji merie Covid-19 taa na maka ọdịnihu.
Ọbụna dịka ọchịchọ na-aga n'ihu na-eto eto ahịa ga-azaghachi nrụgide ndị ọzọ, na-eduga n'ọchịchọ maka nhichapụ ndị ọzọ. Ibu ụzọ ehichapụ site na EU maka iji ihe plastik eme ihe na-akpali R&D ngwa ngwa n'ime usoro ihe ọhụrụ, gụnyere:
Hydroentangled wetlaids na-eji eriri ụmụ cellulosic eme ogologo nke mmadụ
Mgbanwe carboxymethyl cellulose ejiri maka airlaids
Polyhydroxyalkanoate (PHA) biopolymers maka Coform na spunlace.
A na-enyocha nlele ahịa maka nhichapụ niile na-adịghị na nyocha ma gụọ na Smithers ọhụrụ ọmụmụ. Nke a gụnyere nkewa ọhụụ nke ahịa ahụ site na ihe na-abụghị ihe ọ bụla, usoro ntanetị na ahịa ala; ya na dataset zuru oke na ihe omuma na omuma maka 2015-2025.